Ukutyala imali kwimarike yaseJapan: iNikkei | Ezezimali
I-Nikkei sisalathiso esifanelekileyo sezabelo zaseJapan, njengenye yeendlela ezizezinye kutyalo-mali kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu. I-Nikkei 225 yeyona isalathiso sisitokhwe saziwayo kwimarike yaseJapan kwaye yenziwe ngama-225 esona sitokhwe samanzi siluhlu Utshintshiselwano ngeTokyo. Ukuba yenye yezangqa zezemali ezinomthamo omkhulu weshishini okoko inani lokuthenga kunye nentengiso eyenziweyo liphezulu kakhulu, ngenani elikhulu lokusebenza phakathi kwabatyali zimali kwihlabathi liphela. Ukuya kwinqanaba lokuba ngumthombo obalulekileyo wesalathiso kwinxalenye elungileyo yeearhente zezemali zeplanethi.
Ngokungafaniyo nezinye ii-indices, ixabiso liye lahlaziywa ezantsi kwiinyanga ezidlulileyo, nge-15%, kwimeko esembindini ukuya kuthi ga kumanqaku angama-19.862 ukusuka kuma-23.510 angaphambili. Esona sizathu siphambili solu hlengahlengiso kukuhlengahlengiswa kwemvumelwano ye-EPS yowama-2020 ye-12%, engakhange isuswe kukuhla kwepremiyamu yomngcipheko. Ukongeza, kufanele kukhunjulwe ukuba kulo nyaka kulindeleke ukuba i-VAT inyuswe nge-Okthobha ka-2019. Ukuqukumbela, isindululo sabarhwebi kukuba bathengise izabelo zabo kuba imeko esembindini evela yi-1,4%, ngesivuno esiqikelelweyo ye-2%.
Kwelinye icala, ine-PER engachazwanga kule meko inokuba kuyo Amanqanaba angama-16,8. Ngelixa kwelinye icala, inegalelo kwimo yokuphononongwa okwangoku eyi-1,4%. Ngamanye amagama, isezantsi kakhulu kunakwimakethi yezemali e-United States naseYurophu. Ukusuka kule ndawo yokujonga, ayisiyiyo eyona ndlela yokwenza ulondolozo lube nenzuzo kuba ayinayo imbono enomtsalane yokuhlaziya kwiinyanga ezizayo. Akumangalisi ukuba amaxabiso abo sele enyukile kakhulu kwiinyanga ezidlulileyo kwaye kukho imeko eya kulungiso kubo.
1 INikkei 225: ukuthengisa ngakumbi kunokuthenga
2 Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho lwakho
3 Umngcipheko wokusebenza eJapan
4 Amaxabiso amancinci awaziwayo
5 Izibonelelo zebhegi yaseJapan
INikkei 225: ukuthengisa ngakumbi kunokuthenga
Ngayiphi na imeko, iingcebiso zijolise kwicala lokulungisa izikhundla kunokuthatha izikhundla kule marike yezemali yasempuma. Yiyo i umngcipheko uphezulu ngaphezu kweenyanga ezimbalwa ezidlulileyo ngenxa yamanqanaba apho esi sikhokelo sichaphazelekayo kwii-equities zamazwe ngamazwe zithengisa. Apho ngeli xesha kukho amathuba okuphulukana nenxalenye yolondolozo lwethu kunaleyo bayizuze ngokuthenga kunye nokuthengisa izabelo kunye nokhuseleko. Ngaphandle kwento yokuba imele uqoqosho olomelele njengolo lwaseJapan, yenye yezona zibalulekileyo kwinqanaba lamazwe aphesheya.
Kwelinye icala, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ngaba ikuxabisile okanye hayi yiya kule ndawo yamazwe aphesheya ukuze wenze utyalomali. Akufanele uyenze ngokulula kuba unokufumana ezinye izinto ezingalindelekanga ukusukela ngoku. Kwaye akufuneki ulibale nangaliphi na ixesha ukuba le nto uyidlalayo ayikho enye into kwaye ayikho ngaphantsi kwemali yakho. Awunakukhetha ngaphandle kokucingisisa ngesi sigqibo ungasithatha kwiiveki ezizayo ngenxa yokufaneleka kwayo. Ngokukodwa ukuba awuzange urhwebe ngezi ntengiso kwizabelo.
Izinto eziguquguqukayo kuqoqosho lwakho
Ukukhula koqoqosho kubuyisa amaqondo amahle ngokuhambelana namandla exesha eliphakathi, axhaswa zizinto ezithunyelwa ngaphandle kunye nenkcitho yoluntu. Imfuno yabucala yasekhaya iya kusokola ngenxa ukunyuka kwe-VAT ukusuka kwi-8% ukuya kwi-10% eye yenzeka ngo-Okthobha ophelileyo. Ngelixa kwelinye icala, uqikelelo lwe-EPS luhlaziywa ezantsi, njengoko iinkampani zaseJapan zithandabuza ukudlulisa ukunyuswa kwemivuzo kunye nokunyuka kwexabiso lezinto ezibonakalayo kumaxabiso okugqibela. Umgaqo-nkqubo wezemali weli lizwe libalulekileyo lase-Asiya liza kuhlala lifanelekile kwaye libe nenzala engeyiyo kude kube sekupheleni kowama-2020. Elinye inqaku lesalathiso kukuba i-yen kufuneka igcine indlela esezantsi kwiinyanga ezizayo ngokuchasene notshintshiselwano lwezinye iimali.
Zonke ezi datha zichazwe lisebe lohlalutyo lweBhanki kufuneka zisetyenziselwe ukwenza isigqibo malunga nokuba abatyali mali abancinci nabaphakathi kufuneka benze ntoni ukwenza utyalomali lwabo lube semthethweni. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko zezi asethi zemali zidweliswe kwimarike yaseJapan. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, yonke into ibonakala ibonisa oko ixesha lihambile ukwenza imisebenzi kule marike yezabelo zamanye amazwe. Ukusuka kolu luvo, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokulinda elona thuba lilungileyo lokwenza izinto esizikhethileyo kwintengiso yesitokhwe yamanye amazwe.
Umngcipheko wokusebenza eJapan
Ewe kunjalo, ukusebenza kule marike yezemali kunemingcipheko ngeli xesha kwaye kufanelekile ukuba baziwe ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Ukuze ukhusele kwiimeko ezingafunekiyo zezi. Ayothusi into yokuba yimarike yezemali eguquguqukayo kakhulu apho kukho umahluko obanzi phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona ncinane yexabiso lesitokhwe. Okungaphezulu koku kwiimarike zelizwekazi elidala ukusukela oko ukwahluka kwabo kungasondela kwi-5% okanye nangakumbi ngamandla. Ngomngcipheko olandelwayo owenzekayo kwiintshukumo ezivulwe ziiarhente zezemali.
Ngelixa kwelinye icala, asinakulibala ukuba ukuvula izikhundla kule marike yezabelo kuthetha ukuthatha iikhomishini eziphezulu. Phantse iphindwe kabini kunaleyo yenziwa kwindawo ekufutshane. Ngale nto besiza kuba nayo phucula inzuzo yemisebenzi yokwenza ukuba utyalomali lube nenzuzo engaphezulu. Kwelinye icala, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba ii-indices zaseJapan zorhwebo ebusuku kumazwe aseYurophu kwaye oku kunokuba yenye ingxaki ukwenza ukuba utyalomali lube semthethweni ngokhuseleko olupheleleyo. Ngamanye amagama, asinakubalandela kunye nakwizitokhwe zelizwekazi lakudala.
Amaxabiso amancinci awaziwayo
Xa sivavanya umngcipheko obangelwa zezi ntlobo zemisebenzi, akufuneki ukuba sinciphise umngcipheko onxulumene nokungazi iinkampani zabo ezidwelisiweyo. Okanye ubuninzi babo, okona kulungileyo. Ukuza kuthi ga ngoku asazi ukuba ngawaphi amacandelo abakowabo, luyintoni uguquko lwabo kwiimarike ze-equity okanye kwiinguqu zabanini zabelo abanazo ngamaxesha onke. Esi sisiganeko esinokuthi sisenzakalise xa sisenza amanye amacebo otyalo-mali kwimarike yaseJapan. Ngaphandle kwezinye iindlela zotyalo-mali ezinobuchwephesha ngakumbi.
Oku kusilela kolwazi kunokuba nefuthe lokuba utyalomali lwethu aluhanjiswanga ngokuchanekileyo kwaye nokuba kunjalo singalahlekelwa yimali ekuthatheni izikhundla. Into enokuthintelwa ngokukhetha iimarike ze-equity ezaziwayo kwaye apho sisebenza rhoqo. Ke ngoko, imakethi yesitokhwe yaseJapan ijolise kubatyali mali abanesimo esinoburharha ngakumbi abanqwenela ukuzama ezinye iimarike zezemali, nangona nje imeko ifuna ezi ntshukumo ukusukela ngoku. Ungaze kubatyalomali abagcinayo okanye abakhuselayo abafuna ezinye iindlela zotyalo-mali.
Izibonelelo zebhegi yaseJapan
Ngelixa ngokuchaseneyo, le misebenzi inecala layo elincomekayo kwaye inokunceda ukuhambisa utyalomali ngokuchanekileyo nangaliphi na ixesha elinikiweyo. Enye yazo kuxa a Ukuphela koxabiso olunokubakho Kwiimarike zamasheya zaseNtshona kwaye ungawusebenzisa lo mthombo ukwenza imali yakho ibe nenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Kodwa le ntsebenzo yenzeka amaxesha ambalwa kakhulu ngonyaka kunye nokuhamba okuthe ngqo. Kwelinye icala, amaxesha okunyusa amandla kule marike yezemali abhengezwe kakhulu kwaye unokuyiphucula inzuzo yotyalo-mali lwakho ngeepesenti ephezulu kunangaphambili.
Kukwafanele ukuvavanya umba ophathelene nomgama osuka kwimarike yezemali ngokukodwa njengale ngokukodwa. Ukuba ufuna ukutyala imali kwimakethi yesitokhwe yaseJapan unokhetho oluncinci olunje ngoku mali mali ngokusekwe kule plaza yamanye amazwe. Okwangoku unesibonelelo esimangalisayo esivela kwiinkampani zolawulo zamanye amazwe ezenziwa phantsi kweendlela ezahlukeneyo zotyalo-mali. Nokuba ubadibanise ne-asethi yemali engenayo esisigxina ukuze ukhusele izikhundla zakho kwezona meko zibi kwiimarike zezabelo.
Okokugqibela, imali yotyalo-mali yezi mpawu ijolise kwimeko esisigxina kwaye kuzo zonke iimeko ziphakathi kwaye zide. Ukwenza ibhegi yokonga ezinzileyo kule minyaka imbalwa izayo. Ngoncedo lokuba ungadlulisela imali simahla ukuba izinto aziphuhlisi njengoko abaniniyo bekulindelekile. Ngothotho lweekhomishini ezinokhuphiswano ngakumbi kunakwenye imali esekwe kwezinye iindawo zejografi. Nokuba yeyiphi na imeko, yenye indlela entsha yotyalo-mali onokuyisebenzisa nanini na kwaye nakweyiphi na imeko. Ngaphandle kwezinye iindlela zotyalo-mali ezinobuchwephesha ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukutyala imali kwimarike yaseJapan: iNikkei